Akwụkwọ ndị akwadoro - IntegritySyndicate.com
Mbido Ngwa ọrụ Akwụkwọ ndị a tụrụ aro
Akwụkwọ mmasị dị na Amazon gụnyere Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ ntụaka na isiokwu dị iche iche gụnyere ozizi na nkatọ ederede.
Nsụgharị Bible na Agba Ọhụrụ
Nnyocha e nyochara
Akụkọ Nzukọ-nsọ ​​mmalite
Luke - Ọrụ
Mbido / Baptizim nke Mmụọ Nsọ
Ebe nchekwa akwụkwọ enwere ike ịlele n'efu
ESV Nnukwu Bipute Akwụkwọ Nsọ Nkeonwe (TruTone, Forest/Tan, Design Trail)
The ESV Nnukwu Bipute Akwụkwọ Nkeonwe nwere ọmarịcha ederede Akwụkwọ Nsọ nwere isi iri na abụọ n'obere mkpụbelata mkpụbelata ― nke sitere na akụrụngwa dị mma yana ederede dakọtara iji belata ngosi site na ibe ruo na ibe, nke ezubere ịnye ahụmịhe ọgụgụ dị ọcha.
Ọdịdị ejikọtara na ọnya ọnya
Ụdị 12 Milo Serif OT
E kere ya karịsịa maka ọmụmụ Bible. Otu n'ime isi ihe dị na ya bụ na a na -enye ihe odide ala ala na ala nke ibe ọ bụla na -ezo aka n'ụdị dị iche iche nke ederede Grik n'ozuzu ekewara n'ime ụzọ abụọ: Otu “Alexandria” na -anọchite anya ihe odide kacha ochie. Otu “Byzantine” na -anọchite anya imirikiti ihe odide. Ọ na -egosikwa obere dị iche iche. N'okpuru ala nke ibe ọ bụla, e nwere otu ụdị ngwa ederede nke na -egosi nhọrọ ederede nke nsụgharị Bible iri abụọ maka amaokwu ọ bụla nke Agba Ọhụrụ. Ọ bụ ezie na atụgharịrị site na echiche atọ n'ime otu, ntụgharị asụsụ a na-eji Ederede Critical (NA-20) dị ka ederede isi 27% nke oge a na-agụkwa ya nke ukwuu.
Lexham Septuagint Bekee: Nsụgharị Ọhụrụ
he Lexham Septuagint Bekee (LES) bụ ntụgharị ọhụrụ nke Septuagint, ụdị Grik nke ihe odide Agba Ochie ejiri n'oge Oge Agba Ọhụrụ na na ụka mbụ. Edebere ụdị ọmarịcha n'ụdị dị mma, otu kọlụm, LES na-enye mbipụta Septuagint Bekee nkịtị, nke a na-agụ agụ, na nke a na-ahụ anya maka ndị na-agụ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ. Na -ejigide ụdị aha na ebe ndị ama ama, LES na -enye ndị na -agụ ya ike ịgụ ya n'akụkụ Bible Bekee ha nwere mmasị. N'ịbụ nke a sụgharịrị site na mbipụta Sepete nke Swete, LES na -ejigide ihe ederede mbụ pụtara, na -eme ka Septuagint nweta ndị na -agụ ya taa.
Bible Nsọ: Site na Ederede Ebe Ọwụwa Anyanwụ Oge Ochie: Nsụgharị George M. Lamsa Site na Aramaic nke Peshitta
Site n'akwụkwọ a, onye ọkà mmụta Agba Ọhụrụ kachasị ama na -enye onyinye akara na akwụkwọ gbasara oge ndịozi mbụ. Oge a, mgbe ebe nchekwa Jizọs dị ọhụrụ mana enweghị akwụkwọ edere banyere ya dị adị, na -etinye onwe ya nke ọma na nkọwa nkọwa Dr. Cadbury na -eji. Ebumnuche ebumnuche ibe ndị a, bụ ka ọ gosipụta na ọ bụghị izi ezi nke akwụkwọ Ọrụ dị ka ihe nkiri na omenala na echiche nke ọ na -egosipụta…. Anyị nwere ike ịga ije ebe Pọl onyeozi jere ije, hụ ihe ọ hụrụ, wee nwekwuo ike n 'ụlọ n'ime ụwa ya. Isi ise na -ekwu maka nke ọ bụla n'ime eriri ọdịnala ise dị mgbe ahụ: Roman, Greek, Jewish, Christian, and cosmopolitan. Mgbalị nke isii iji wughachi akụkọ mbụ nke akwụkwọ Ọrụ Ndịozi.
Otu Chineke ahụ, Nna ahụ, Nwoke Otu Mesaya: Nsụgharị Ọhụrụ na Nkọwa
Ọtụtụ ndị na -aga chọọchị amaghị na ihe ha na -enweta na chọọchị dị ka '' Akwụkwọ Nsọ '' ka ejiri echiche nke echiche Gris kọwaara ha. Omenala a na -emetụta nkuzi Ndị Kraịst ugbu a, na -ekpuchi akụkụ dị mkpa nke nkwenye mbụ nke Jizọs na Ndịozi. Ndị kansụl nke Akwụkwọ Nsọ mere ihe dị ukwuu iji kpuchie 'okwukwe a napụtara otu mgbe'. Ndị na-ajụ eziokwu maka eziokwu na-azọpụta nke Akwụkwọ Nsọ ga-ahụ ntụgharị asụsụ a nke mmeghe Agba Ọhụrụ. Ọtụtụ nsụgharị na -achọkarị 'ịgụ n'ime' echiche nke Akwụkwọ Nsọ nke ndị edemede Agba Ọhụrụ ebughị n'obi.
Testament Ọhụrụ nke Tyndale
E bipụtara nsụgharị Agba Ọhụrụ a n'asụsụ Bekee site n'asụsụ Grik mbụ ya na Germany na 1534 wee zoro ezo bata na England. Ya mere ọ gbanahụrụ akara aka Tyndale nke mbụ, nke ndị ọchịchị jidere ma kpọọ ya ọkụ n'ihu ọha. Mbipụta nke 1534 kpasuru ụlọ ọrụ ụkọchukwu iwe site n'inye ndị nkịtị ohere ịnweta okwu Chineke, na ebipụta n'asụsụ Bekee na nke mbụ ya. A chụpụrụ Tyndale, onye nọbuworo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma mesịa kpọọ ya ọkụ n'elu osisi maka nkwulu. N'ime afọ iri asatọ sochirinụ, afọ Shakespeare n'etiti ndị ọzọ, ntụgharị ntụgharị nke Tyndale bụ ntọala nke akwụkwọ Bekee niile. Na mgbe e bipụtara King James Bible ahụ e nyere ikike na 1611, e wepụrụ ọtụtụ n'ime akụkụ ya ndị kasị mma, ọ bụ ezie na a maghị ha, site n'ọrụ Tyndale.
Nhazi nke akwụkwọ nsọ nke Ndị Kraịst
Lee McDonald edeela akụkọ na -atọ ụtọ ma dịkwa mfe maka nguzobe nke Akwụkwọ Nsọ Ndị Kraịst, na -achịkọta isi ihe akaebe doro anya, na -arụ ọrụ site na nsogbu ndị bụ isi, na -erukwa nkwubi okwu na -eme ka e kwenye. Na -emeso akwụkwọ nsọ nke Agba Ochie na Agba Ọhụrụ iche, ọ na -enye ntụgharị nke ọtụtụ isi mmalite oge ochie, nchịkọta dị mma nke arụmụka ndị ọkà mmụta, yana ntuziaka bara uru maka akwụkwọ sara mbara nke isiokwu gbasara ya. Akwụkwọ a ga -ahụ ndị na -agụ akwụkwọ ekele maka ụmụ akwụkwọ, ndị ozuzu aturu, na ndị na -ajụ ajụjụ.
Ozi-ọma nke anọ na nkatọ na nkọwasị nso nso a, mbipụta nke anọ
Wilbert Howard bụ onye a ma ama na nkọwapụta nke Oziọma nke anọ, na n'ime akwụkwọ a, o gosipụtara ezi nduzi maka ụmụ akwụkwọ na ndị na-agụ akwụkwọ n'ozuzu site n'oke nkatọ akụkọ ihe mere eme na nke ime dịka ndị a metụtara nkọwa nke Oziọma a. CK Barrett gbakwunyere akụkụ nke ya ka ọ were ndekọ ziri ezi nke na-eso ọrụ, site na 1961, na nsogbu nke Oziọma nke anọ.
Ederede nke agba ọhụrụ: nnyefe ya, nrụrụ aka na mweghachi (mbipụta nke anọ)
Akwụkwọ mbipụta Bruce M. Metzger nke edegharịrị nke ọma bụ akwụkwọ ntuziaka kachasị ọhụrụ maka nkatọ ederede nke Agba Ọhụrụ. Ederede nke Agba Ọhụrụ. Ntughari a na -eweta mkparịta ụka banyere ihe ndị dị mkpa dị ka ihe odide Grik mbụ na ụzọ nkatọ ederede ka ọ dị ugbu a, na -ejikọ nchọpụta nyocha na nso nso n'ime akụkụ ederede (na -emegide ntụgharị ndị gara aga, nke chịkọtara ihe ọhụrụ na ndetu n'ime ngwa mgbakwunye). ). Ederede ọkọlọtọ maka ọmụmụ n'ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ na akụkọ banyere Iso Ụzọ Kraịst kemgbe mbipụta mbụ ya na 1964.
* Bart Ehrman kwesịrị ịtụle maka ọrụ mbụ ya na nkatọ ederede - ọ bụghị ọrụ ya na nso nso a (ihe karịrị afọ 20) na nkọwa Akwụkwọ Nsọ.
Mmebi iwu nke Ọtọdọks nke Akwụkwọ Nsọ: Mmetụta nke arụmụka nke ụka mbụ na ederede nke agba ọhụrụ
Ndị mmeri abụghị naanị ide akụkọ ihe mere eme: ha na -emepụtagharịkwa ederede. Nke a na -enyocha mmekọrịta chiri anya n'etiti akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịnala ọdịnala nke Agba Ọhụrụ na -apụta, na -enyocha etu ọgụ dị n'etiti '' ịjụ okwukwe '' na '' orthodoxy '' Ndị Kraịst si metụta nnyefe nke akwụkwọ nke e mere ọtụtụ arụmụka na ya.
Ikpe a na -emegide Q: Nnyocha na mbụ Markan na Nsogbu Mmekọ
Kemgbe ihe karịrị otu narị afọ nzere mmụta Oziọma anabatala akwụkwọ echiche nke a na -akpọ Q dị ka otu n'ime isi mmalite nke Oziọma Ndị Ejikọtara ọnụ. N'oge na -adịbeghị anya, a gbanwerela ya site na isi okwu gaa na Oziọma n'onwe ya. Mana, Mark Goodacre kwuru na Case Against Q, nnabata nke Q enweghị ike ịrụ ọrụ dị ka arụmụka maka ịdị adị ya. Site n'oge ruo n'oge, olu dị iche iche na -ekwu okwu megide nnabata zuru oke nke Q dị ka Oziọma. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọka mmụta ekwuola, dịka ọmụmaatụ, ihe ọmụma Luk banyere Matiu na Mak ga -enyere mmadụ aka ịza ajụjụ. Yabụ, na The Case Against Q Goodacre na -enye nkọcha na nkọwa zuru oke banyere echiche Q, na -enyocha arụmụka kachasị mkpa nke ndị na -akwado Q.
Nsogbu synoptic: ụzọ site na maze
Eleghi anya oke iwe na akụkọ ihe mere eme, Nsogbu Synoptic akpaliwo mmasị n'ọgbọ ndị ọkà mmụta. N'agbanyeghị nsogbu Synoptic ka ụmụ akwụkwọ na -enweghị ike iru, n'oge na -adịghị anya, ọ gbanyere na mgbagwoju anya ya. Mana ugbu a Mark Goodacre na -enye ụzọ site na oke maze, na nkwa nke mpụta na njedebe, na -akọwa n'ụzọ na -atọ ụtọ ma na -enye ume ọhụrụ ihe ọmụmụ Nsogbu Synoptic gụnyere, ihe kpatara o ji dị mkpa yana otu esi edozi ya. Nke a bụ ntuziaka a na-agụ agụ, nke ziri ezi na nke ọhụrụ, dị mma maka ụmụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na onye na-agụkarị.
Jisọs Echetara: Iso Ụzọ Kraịst n’ime Ime, Mpịakọta nke 1
A na-ahụ James Dunn n'ụwa niile dị ka otu n'ime ndị ọkà mmụta Akwụkwọ Nsọ kachasị taa. N'ịbụ onye odeworo ọmụmụ ihe na-agbawa obi nke Agba Ọhụrụ na ọrụ ọkọlọtọ na nkà mmụta okpukpe nke Pọl, Dunn n'ebe a tụgharịrị mkpịsị akwụkwọ ya na ịrị elu nke Iso Ụzọ Kraịst n'onwe ya. Jizọs chetara bụ nkeji nkeji mbụ n’ihe ga-abụ akụkọ ihe mere eme mpịakọta atọ dị mkpa nke otu narị afọ mbụ na iri abụọ nke okwukwe.
N'ilekwasị anya na Jizọs, mpịakọta nke mbụ a nwere akụkụ dị iche iche. Ọ na-enweta nkuzi ndị a ga-amụta site na "ọchịchọ maka Jizọs akụkọ ihe mere eme" ma na-ezute ihe ịma aka nke usoro ọmụmụ na ntule akụkọ ihe mere eme na nkà mmụta okpukpe nke ọdịnala Jizọs. Ọ na-enye echiche ọhụrụ ma mmetụta Jizọs nwere na n'ọdịnala banyere Jizọs dị ka ọdịnala ọnụ - ya mere isiokwu a bụ "Echetara Jizọs." Ọ na-enye nyocha ọhụrụ nke nkọwa nke ọdịnala ahụ, na-emesi njirimara ya ike (kama iche) atụmatụ. Ihe kwesịrị ịrịba ama bụ ọgwụgwọ Dunn banyere ajụjụ isi iyi (karịsịa Q na Oziọma ndị na-abụghị nke Akwụkwọ Nsọ) na nke Jizọs onye Juu n'ọnọdụ Galili ya.
Na nyocha ya zuru oke banyere ọdịnala Baptist, ebumnuche alaeze, ọkpụkpọ oku na agwa nke ịbụ ndị na-eso ụzọ, ihe ndị na-ege Jizọs ntị chere banyere ya, ihe o chere banyere onwe ya, ihe mere e ji kpọgidere ya n'obe, na otu na ihe kpatara nkwenye na mbilite n'ọnwụ Jizọs si malite. .
Malite na Jerusalem: Iso Ụzọ Kraịst n’ime Ime, Mpịakọta nke 2
Mpịakọta nke abụọ na Christianity Magisterial na Ime trilogy, Malite na Jeruselem na-akọwa mmalite mmalite nke okwukwe Ndị Kraịst site na 30 ruo 70 OA. Mgbe James Dunn kọwapụtasịrị ọchịchọ a na-achọ chọọchị akụkọ ihe mere eme (yiri n’ọchịchọ a na-achọ Jizọs bụ́ akụkọ ihe mere eme) ma tụleghachi ebe ndị e si nweta ya, James Dunn gbasoro usoro njem ahụ sitere n’aka Jizọs “malite na Jeruselem.”
Dunn meghere site na nyocha nke ọma nke ihe a pụrụ ikwu banyere obodo Jerusalem mbụ, ndị Grik, ozi Pita, na mpụta nke Pọl. Mgbe ahụ, o lekwasịrị anya nanị n’ebe Pọl nọ—nchịkọta oge nke ndụ ya na ozi ya, nghọta ya banyere ọkpụkpọ òkù ọ kpọrọ dị ka onyeozi, na àgwà nke ụka ndị o hiwere. Akụkụ nke atọ na-akọwapụta ụbọchị ikpeazụ na ihe nketa akwụkwọ ọgụgụ nke ndị isi atọ bụ́ isi nke ọgbọ mbụ nke Iso Ụzọ Kraịst: Pọl, Pita, na Jemes, nwanne Jizọs. Nkebi nke ọ bụla na-agụnye mkparịta ụka zuru ezu na nnukwu akụ nke akwụkwọ sekọndrị na ọtụtụ isiokwu ndị a na-ekpuchi.
Ọ bụghịkwa onye Juu ma ọ bụ onye Grik: njirimara agbagoro agbago: Iso Ụzọ Kraịst n’ime ime, Mpịakọta nke 3
Nkeji nke atọ na nke ikpeazụ nke James Dunn's magisterial akụkọ ihe mere eme nke Ndị Kraịst malite na 190 OA, Ọ bụghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik: njirimara agbadoro na-agụnye oge e bibisịrị Jeruselem na 70 OA ruo na narị afọ nke abụọ, bụ́ mgbe òtù Jizọs ka dị ọhụrụ mere ka ihe e ji amata ya pụta ìhè na ihe owuwu ndị ọ ga-eji mee ka mmasị ya na-arị elu n’ime iri afọ na narị afọ ndị sochirinụ guzosie ike.
Dunn na-enyocha nke ọma isi ihe ndị kpụrụ Iso Ụzọ Kraịst nke ọgbọ mbụ na karịa, na-enyocha nkewa nke ụzọ dị n'etiti Iso Ụzọ Kraịst na okpukpe ndị Juu, Nkwenye nke Iso Ụzọ Kraịst, na nzaghachi nye Gnosticism. Ọ na-egwupụta ihe nile nke narị afọ mbụ na nke abụọ, gụnyere Oziọma Agba Ọhụrụ, Apọkrịfa Agba Ọhụrụ, na ndị nna chọọchị dị ka Ignatius, Justin Martyr, na Irenaeus, na-egosi otú ọdịnala Jizọs na ihe atụ nke Jemes, Pọl, Pita, na-egosi. na John ka bụ mmetụta ndị a na-akwanyere ùgwù mana ọ bụkwa isiokwu nke esemokwu siri ike ka ndị ụka mbụ na-agba mgba na njirimara ya na-agbanwe agbanwe.
Eusebius: Akụkọ nke Ụka
Gụnyere ntụgharị asụsụ Maier kacha ere kacha ere, nkọwa akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ ọ bụla nke Akụkọ Ụka, na maapụ na ihe atụ iri. A na-akpọkarị “Nna nke Akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị,” Eusebius dekọrọ ihe ọmụma dị oké mkpa banyere ndụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, otú e si malite Agba Ọhụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị Rom, na mkpagbu a kpagburu Ndị Kraịst oge mbụ.
Omenala Ndị Kraịst: A History of Development of Doctrine, Vol. 1: Mmalite nke ọdịnala Katọlik (100-600) (Mpịakọta nke 1)
Ka ọ na -erule afọ 600 ozizi Ndị Kraịst enwetala ihe Jaroslav kpọrọ “nkwenye nke Ọtọdọks”. Afọ 100 ruo 600 bụ oge nke oke ume na ume. Nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke oge nsogbu a siri ike. Pelikan gbadoro anya na mmekọrịta dị aghụghọ dị n'etiti ihe ndị kwere ekwe kwenyere, ihe ndị nkuzi ma ndị ụkọchukwu na ndị jụrụ okwukwe - kụziri, na ihe ụka kwupụtara dị ka nkwenkwe n'ime narị afọ isii mbụ nke uto.
Nkà mmụta okpukpe nke Luk na Ọrụ Ndịozi: Mmemme Nkwa Chineke, Mezuru maka Mba Niile (Biblical Theology of the New Testament Series)
Ọrụ nkwalite a nke Darrell Bock na -enyocha nke ọma na nkà mmụta okpukpe nke ozioma Luk na akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. N'akwụkwọ ya, Luk dekọtara akụkọ banyere Chineke na-arụ ọrụ site n'aka Jizọs iji weta oge ọhụrụ nke nkwa na ime ka mmụọ nwee ike ka ndị nke Chineke wee bụrụ ndị nke Chineke ọbụlagodi n'etiti ụwa ajọ omume. Ọ bụ ozi ụka ka chọkwara taa. Bock na-ekpuchi isi okwu Lukan ma na-ewepụta onyinye pụrụ iche nke Luk-Ọrụ Ndịozi na Agba Ọhụrụ na akwụkwọ nke Akwụkwọ Nsọ, na-enye ndị na-agụ ya nghọta miri emi na nkọwa zuru oke nke nkà mmụta okpukpe Lukan na nnukwu okwu nke Akwụkwọ Nsọ.
Nchigharị na Luk-Ọrụ: Ọrụ Chukwu, Nghọta Mmadụ, na Ndị Chineke
Nchegharị na ntụgharị bụ isi okwu na nkọwa Agba Ọhụrụ yana na ndụ Ndị Kraịst. Kaosinadị, ọmụmụ nke ntụgharị uche na Iso Ụzọ Kraịst nke mbụ abụrụla nke echiche nke mmụọ dị iche na ụwa Agba Ọhụrụ. Onye na-eduzi ọkà mmụta Agba Ọhụrụ Joel Green kwenyere na nlebara anya nke ọma na akụkọ Luk-Ọrụ na-achọ ịtụgharị uche dị ukwuu banyere ọdịdị nke ntụgharị Kraịst. N'ịdabere na sayensị ọgụgụ isi na inyocha ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ na Luk-Ọrụ Ndịozi, akwụkwọ a na-ekwusi ike n'ụdị ndụ mmadụ ka ọ na-enyocha mgbanwe ndụ nke ozi nke ntụgharị aka gosipụtara, na-enye ọgụgụ ọhụrụ nke akụkụ dị mkpa nke nkà mmụta okpukpe Agba Ọhụrụ.
The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to Luke-Ọrụ Ndịozi
Kedu ihe ọrụ Mmụọ Nsọ pụtara na Luk-Ọrụ, gịnịkwa ka ọ pụtara taa? Roger Stronstad na-enye mmụta dị omimi na nke na-akpali iche echiche nke Luk dị ka onye ọkà mmụta okpukpe na-adọrọ adọrọ nke nghọta ya gbasara Mmụọ bụ nke nghọta ya banyere Jizọs na ọdịdị nke ụka mbụ. Stronstad chọtara ọrịa oyi nke Luk na akụkọ ihe mere eme nke okpukpe ndị Juu ma lee Luk anya dị ka ọkà mmụta okpukpe nwere onwe ya nke na -enye onyinye pụrụ iche na pneumatology nke Agba Ọhụrụ. Ọrụ a na -ama ndị Protestant ọdịnala aka inyochagharị mmetụta Pentikọst ma nyochaa ọrụ mmụọ nsọ na -akwado ndị Chineke maka ọrụ nke ozi a na -agwụbeghị. E degharịrị ma melite mbipụta nke abụọ n'ime ya wee tinye okwu mmalite nke Mark Allan Powell.
Luke: Ọkọ akụkọ ihe mere eme & ọkà mmụta okpukpe
Ewezuga Pọl onyeozi, o doro anya na Luk bụ ike kacha nwee ike n'akwụkwọ nke Agba Ọhụrụ. Oziọma ya na Ọrụ ya nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Agba Ọhụrụ, ọnụ olu akụkọ ha na -eburu anyị ihe karịrị afọ iri isii, site n'ọmụmụ Jizọs ruo mgbe a tụrụ Pọl mkpọrọ na Rom. O siri ike iche n'echiche anyị banyere oge agba ọhụrụ na -enweghị akwụkwọ Luk. N'ihi nke a, a nyochaala ajụjụ banyere ntụkwasị obi Luk mere eme ugboro ugboro. N'ime ọmụmụ ihe a Howard Marshall na -ekwusi ike na Luk kwesịrị ntụkwasị obi dịka ọkọ akụkọ ihe mere eme. Ma Luk abụghị nanị ọkọ akụkọ ihe mere eme. Ọ bụkwa ọkà mmụta okpukpe nke na -achọta igodo nkọwa ya na nnukwu isiokwu nke nzọpụta. Marshall na -enye anyị ntuzi aka dị mma maka nkà mmụta okpukpe Luk nke nzọpụta dịka akọwara ya na akụkọ Oziọma, mana na -elegide anya na mmepe ya na -aga n'ihu na ọrụ ibe, Ọrụ Ndịozi. Ederede na-enyocha usoro mmụta Lukan n'ime afọ iri nke 1979-1988.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkà mmụta agba ọhụrụ nke ụwa dere ya, e bipụtara nkọwa a gbasara Ọrụ Ndịozi n'afọ 1996. James Dunn buru ụzọ were onye na-agụ ya site n'ajụjụ ndị odee, ndị na-ege ntị, ụbọchị, ebumnuche, na nhazi akwụkwọ. Mgbe ahụ, ọ tụlere ụdị edemede akụkọ ihe mere eme nke anyị na-ahụ na akụkọ nke Ọrụ Ndịozi, kọwaa ozizi nkà mmụta okpukpe nke akwụkwọ ahụ, ma na-enye nkọwa nke akwụkwọ akụkọ banyere isi mmalite na ọmụmụ ihe a họọrọ, gụnyere ọrụ e bipụtara n'etiti 1996 na 2016. Nkọwa a n'ozuzu ya na-enye ozi na echiche dị mkpa maka ịgụ ihe ga-eme ka ihe Dunn kwenyere na ọ bụ akwụkwọ kacha atọ ụtọ na agba ọhụrụ.
New Century Bible, St. Luke: Okwu Mmalite, Revised Version With Notes, Index and Maps (Classic Reprint)
Akwụkwọ ikike nke Luk nwere nkọwa ala ala na nkọwa (1906)
Free na Archive Ịntanetị:
Jizọs na Mmụọ Nsọ: Ọmụmụ gbasara ahụmịhe okpukperechi na ọmarịcha ahụmịhe nke Jizọs na Ndị Kraịst nke mbụ dịka e gosipụtara na Agba Ọhụrụ.
N'ime akwụkwọ a na -atọ ụtọ James DG Dunn na -enyocha ọdịdị nke ahụmịhe okpukpe ndị nọ n'isi nke Iso Ụzọ Kraịst na -apụta. Dunn buru ụzọ leba anya na ahụmịhe okpukperechi nke Jizọs, na -elekwasị anya ọkachasị na ahụmịhe nke Chineke n'ihe banyere mmetụta nwa ya na mmụọ nke mmụọ. Ọ na -atụlekwa ajụjụ ma Jizọs ọ̀ bụ onye na -adọrọ adọrọ. Dunn na -esote na -enyocha ahụmịhe okpukpe nke obodo Ndị Kraịst oge mbụ, ọkachasị ngosipụta mbilite n'ọnwụ, Pentikọst, na ihe ịrịba ama na ihe ịtụnanya Luk kọrọ. N'ikpeazụ, Dunn na -enyocha ahụmịhe okpukpe nke na -eme Pọl mmetụta nke ukwuu na nke mechara kpụzie Iso Ụzọ Kraịst Pauline na ndụ okpukpe nke ụka ya.
Baptizim na Mmụọ Nsọ
Omuma a, ugbu a na mbipụta akwụkwọ edemede, na -ewebata onye na -agụ akụkụ kachasị iche nke nkà mmụta okpukpe Pentikọstal - baptism n'ime Mmụọ Nsọ. James Dunn na-ahụ ime baptism ime mmiri dịka nanị otu ihe n'ime usoro ọgbụgba-ndụ ọhụrụ nke ntọghata na mmalite. Onyinye nke mmụọ nsọ, ka o kwenyere, bụ ihe bụ isi. Maka ndị dere Agba Ọhụrụ naanị ndị natara Mmụọ ka a ga -akpọ Ndị Kraịst. Maka ha, nnabata nke mmụọ bụ ahụmịhe doro anya na nke na-adịkarị egwu-ahụmihe dị oke mkpa na ihu igwe na ntụgharị mgbanwe-nke a na-echetakarị Onye Kraịst mgbe echetara ya mmalite okwukwe na ahụmịhe nke Onye Kraịst.
Mbido Ndị Kraịst na Baptizim n'ime Mmụọ Nsọ: Mbipụta Edegharịrị nke Abụọ (Akwụkwọ Michael Glazier)
Ruo ugbu a nkuzi nke ime mmụọ nsọ sitere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ole na ole, nke arụrịtara nkọwa ya. Obi abụọ a na -enye ndị na -akwalite baptism na Mmụọ Nsọ.
Ugbu a achọtala ihe akaebe ọhụrụ na ndị edemede mgbe Akwụkwọ Nsọ malitere (Tertullian, Hilary of Poitiers, Cyril nke Jerusalem, John Chrysostom, Philoxenus, na Siria) nke na-egosi na ihe a na-akpọ baptism n'ime Mmụọ Nsọ bụ ihe dị mkpa na mbido Ndị Kraịst (baptism) , nkwenye, Oriri Nsọ). Maka na ọ bụ akụkụ nke nbata n'ime Ụka, ọ bụghị ihe gbasara ime nsọ nsọ nkeonwe, kama nke ofufe ọha. Ya mere, ọ bụ ma ka bụrụ ụkpụrụ.
Ndị otu Ndị Kraịst nke Mmụọ: Akụkọ Ndekọ nke mmụọ ime mmụọ Pentikọstal site na Chọọchị mbụ ruo ugbu a
N'etiti otu niile dị na Krisendọm, otu Pentikọstal/Charismatic bụ nke abụọ na -abụghị naanị Chọọchị Roman Katọlik, na -eto nke na -egosighi akara nbelata. Ndị na -akwado ya na -ekwupụta na Pentikọstal Movement, nke malitere na Azusa Street na 1906, bụ nke a na -enwetụbeghị ụdị ya na akụkọ ntolite Ndị Kraịst kemgbe narị afọ mbụ nke Ụka na nnabata nke ngosipụta nke Mmụọ Nsọ dịka ịgwọ ọrịa nke Chineke, ọrụ ebube, na ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche. Agbanyeghị na agbanyeghị na ọ nwere ike bụrụ nke a na -enwetụbeghị ụdị ya na ogo nke uto, Stanley M. Burgess na -arụ ụka na nke ahụ adịtụbeghị mbụ n'echiche. N'ime ndị otu mmụọ nke Ndị Kraịst, Burgess na-anakọta ihe akaebe akwụkwọ akụkọ maka puku afọ abụọ nke ndị mmadụ na otu dị iche iche gosipụtara ihe onyinye ime mmụọ, ofufe, na ahụmịhe nke Pentikọstal/charismatic.
Narị Afọ nke Mmụọ Nsọ: Afọ 100 nke mmelite Pentikọstal na Charismatic, 1901-2001
Akụkọ mgbe ochie nke mmegharị Pentikọstal na Charismatic na ntụnye na -akpali mmasị maka ndị na -anọghị na mmegharị ahụ, Narị Afọ nke Mmụọ Nsọ na -akọwa akụkọ ọrụ ebube nke uto Pentikọstal/Charismatic - na US na gburugburu ụwa. Akwụkwọ a nwere isi ise site n'aka onye ọkọ akụkọ ihe mere eme Pentikọstal, Vinson Synan, yana ntinye ndị ọzọ site na ndị isi Pentecostal/Charismatic - David Barrett, David Daniels, David Edwin Harrell Jr., Peter Hocken, Sue Hyatt, Gary McGee, na Ted Olsen.
Ozizi Atọ n'Ime Otu: Ahụhụ nke Onye Kraịst merụrụ ahụ
Ndị dere akwụkwọ ahụ na -agbagha echiche ahụ nke na echiche nke Atọ n'Ime Otu bụ ihe nnọchianya nke Chineke na -anọchite anya ya n'ụzọ ziri ezi ma gosipụta na n'ime oke akwụkwọ nsọ, a kwupụtara Jizọs dịka Mesaịa, Ọkpara Chineke, mana ọ bụghị Chineke n'onwe ya. Ka oge na -aga, mmepe nke ọmụmụ nke Kraịst malitere na narị afọ nke abụọ kọwahie ozizi Akwụkwọ Nsọ nke Chineke na Kraịst site n'ịgbanwe usoro okwu nke Akwụkwọ Nsọ nke Nna na Ọkpara. Ihe omume ọjọọ a tọrọ ntọala ntọala nke okwukwe e degharịrị, nke Akwụkwọ Nsọ na -akwadoghị nke kwesịrị ịma aka. Akwụkwọ a nwere ike bụrụ ngosipụta doro anya nke ozizi nke gbanyere mkpọrọgwụ, dị ka ọ dị na mbụ, na Akwụkwọ Nsọ Hibru. Ndị ode akwụkwọ na-ewepụta arịrịọ arụmụka siri ike maka nghọta nke Chineke na Jizọs n'ihe gbasara akwụkwọ Ndị Kraịst mbụ.
Iweghachi Kraịst nke Akwụkwọ Nsọ: Jizọs ọ bụ Chukwu?
Akwụkwọ a na -enye nyocha dị oke mkpa maka ozizi Atọ n'Ime Otu, na -achọpụta nzụlite ya na inyocha ọgụgụ isi, nkà ihe ọmụma, na nkà mmụta okpukpe nke kpụrụ nkuzi a na -akpa ike nke Iso Ụzọ Kraịst. N'agbanyeghi na echiche nke Atọ n'Ime Otu dị n'etiti Iso Ụzọ Kraịst, yana mkpa ya dị ka otu n'ime ụkpụrụ bụ isi nke na -ekewapụta Iso Christianityzọ Kraịst na okpukpe ndị Juu na Alakụba, enweghị ozizi zuru oke n'akwụkwọ nsọ nke Akwụkwọ Nsọ. Kama nke ahụ, ọ malitere site na njikọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahọpụtara yana echiche nkà ihe ọmụma na okpukpe nke obodo Hellenistic oge ochie. Marian Hillar na -enyocha mmepe nke echiche Atọ n'Ime Otu n'ime afọ mmalite nke Iso Ụzọ Kraịst site na mmalite ya na echiche nkà ihe ọmụma Gris oge ochie na echiche okpukpe na mpaghara Mediterenian. Ọ na-akọwapụta isi mmalite dị iche iche nke echiche Atọ n'Ime Otu nke ndị ọkà mmụta leghaara anya nke ọma, gụnyere ihe odide Gris n'etiti Platonic nke Numenius na akwụkwọ metaphysical Egypt na ihe ncheta na-anọchite anya chi dị ka atọ.
Kraịst Tupu Okpukpe: Ịchọpụta Jizọs nke Akụkọ
Ọtụtụ Ndị Kraịst amaghị etu echiche ha n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa si dị iche na ndị dere akụkọ mbụ nke ndụ Jizọs. Pastọ Jeff Deuble na -akpọ oku ịkpọ oku ka ha bute ọgbụgba ama nke Akwụkwọ Nsọ ụzọ karịa ụkpụrụ ụka ka emesịa nke echiche nke ndị Gris nwere mmetụta na ya, ka ha wee chọtaghachi Iso Ụzọ Kraịst dị mfe, na -agbasaghị.
N'iji nlezianya na -enye ozi sitere na akwụkwọ nsọ, akụkọ ihe mere eme, ndị Juu, na nke Ndị Kraịst gbasara etu ndị na -eso ụzọ Kraịst mbụ siri chee banyere ya, akwụkwọ a na -ekwe nkwa nghọta ọhụrụ na nghọta bara ụba nke njirimara Kraịst. Karịa ihe ọmụma, Kraịst Tupu Okwukwe bụ ọkpụkpọ oku inyocha njirimara nke Jizọs Kraịst, na -etinye nsọpụrụ na amara.
Nanị Otu Ezi Chineke ahụ: Nnyocha nke Otuto nke Akwụkwọ Nsọ
Okwukwe nke Akwụkwọ Nsọ abụghị nke Atọ n'Ime Otu kama ọ bụ nke na -adịghị agbanwe agbanwe. Ozi Chineke nye mmadụ bụ ọkpụkpọ oku ka e nwee okwukwe na Yahweh, onye naanị ya bụ Chineke nke Israel. Okpukpe nke otu Chineke gbanyere mkpọrọgwụ n'iwu na ndị amụma, wee gbasaa n'ime obi ndị Chineke. Jizọs kwadoro ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ mgbe ọ na -ekpegara Nna ya ekpere, "Nke a bụ ndụ ebighi ebi, ka ha wee mara gị, onye naanị ya bụ ezi Chineke, marakwa Jizọs Kraịst onye i zitere." N'ime omumu a banyere otụtụ nke Akwụkwọ Nsọ na ozizi atọ n'ime otu na otu, anyị na-elebara akụkụ Akwụkwọ Nsọ anya, ọkachasị Jọn 1: 1-18, nke a na-ejikarị akwado ozizi Atọ n'Ime Otu. Akwụkwọ ahụ ji ọ joyụ mechie mgbe ọ na -ewetara ndị Chineke ngọzi dị ebube n'eziokwu na Okwu ahụ ghọrọ anụ ahụ n'ime Jizọs Kraịst wee biri n'etiti anyị.
Gịnị bụ Atọ n'Ime Otu ?: Na -eche maka Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ
Ọ bụrụ na ọ na -ewute Atọ n'Ime Otu, ọ bụghị naanị gị! Kedu ihe ọ pụtara ịsị na Chineke bụ “mmadụ atọ n'otu ihe”? Ọ ike pụtara ọtụtụ ihe, ndị ọkà mmụta okpukpe aghọtala ya n'ọtụtụ ụzọ. Ma olee otú kwesịrị a ga -aghọta ya, oleekwa otu esi ebu ya n'obi na mbụ? Akwụkwọ a na -enwupụta ọkụ na -ekpuchi isiokwu a, na -akwadebe gị ozi bụ isi gbasara ihe echiche na akụkọ ihe mere eme nke echiche atọ n'ime otu, ka ị nwee ike ịhụ nhọrọ dị iche iche wee jiri anya ọhụrụ chọọ akwụkwọ nsọ.
Chineke nke Jizọs n'ìhè nke ozizi Ndị Kraịst
N'oge mmalite nke akụkọ ntolite nke ụka, mmetụta sitere na mba ndị Gris na ndị Rom manyere chi ọdịnala nke ndị Juu n'ike site na usoro nke nkà ihe ọmụma ndị ọgọ mmụọ. Agha okpukperechi nke sochiri kpatara nnukwu nsogbu nye Iso Christianityzọ Kraịst, iwu ndị eze mere ka ịnabata nkwupụta nkà ihe ọmụma banyere Chineke bụ okwu nke ndụ ma ọ bụ ọnwụ. N'ime Chineke nke Jisọs n'ìhè nke Dogma Ndị Kraịst, Chandler na -amalite nyocha siri ike nke akụkọ mmepe nke nkà mmụta okpukpe Ọtọdọks na mmetụta ya na nkọwa ndị ama ama nke Agba Ọhụrụ. Efegharịrị n'akụkụ abụọ, nke mbụ na -enye nlele panoramic nke mmetụta Hellenic na okwukwe Ndị Kraịst oge mbụ, ebe nke abụọ na -elegharị anya nkọwa Akwụkwọ Nsọ. Mgbe ọ na -ede akwụkwọ maka nwa akwụkwọ Onye Kraịst raara onwe ya nye na ọha nwere mmasị, Chandler ji nkwuwa okwu na -arịọ ma akụkọ ihe mere eme oge ochie na agụmakwụkwọ nke oge a ka ọ gwa anyị banyere mmalite ọdịnala anyị kachasị nsọ, wee maa onye na -agụ ya ka ọ dị iche na echiche ndị ahụ na okwu Jizọs.
Otu Chineke & Otu Onyenwe anyị: Ịtụgharị uche na Nkume nke okwukwe Ndị Kraịst
Iwulite ọmarịcha ikpe na -adọrọ mmasị maka ịdị n'otu nke ịgba akaebe nke Akwụkwọ Nsọ gbasara ezi mmadụ nke Jizọs, “Adam ikpeazụ,” ndị dere na -ekpughe ịdị mkpa nke akụkụ abụọ nke ọbịbịa ya: ahụhụ na otuto. Ha na -achọ nlebara anya nke Kraịst nke na -enye ohere maka ekele zuru oke maka nrubeisi ya siri ike nye Chineke n'agbanyeghị ọnwụnwa, ahụhụ na ọbụna ọnwụ ihere. N'ịbụ onye e gosipụtara site na mbilite n'ọnwụ ya, ọ banyere n'ebube wee nọdụ ugbu a n'ọnọdụ ịha nhata na Chineke, nke yiri mmekọrịta Josef na Fero n'Akwụkwọ Jenesis. Ebe ọ bụ na Oziọma Jọn na -adịkarị iche ma na -ebuli elu iji guzobe ma wusie ike n'okpukpe Ọtọdọks, ndị na -ede akwụkwọ na -enyocha nke ọma ihe osise Kraịst pụrụ iche na "Oziọma nke Anọ". Ha na -enwe ihe ịga nke ọma n'itinye ọgbụgba ndụ Jọn n'otu na nghọta dị n'akụkụ akụkụ nke amụma amụma nke Mesaịa ahụ.
Chineke na Jisos; Chọpụta ihe dị na Baịbụl
Odere onye bụbu onye kwere ekwe n'otu (modalist), Joel W. Hemphill, iji gosi amaokwu 760 NT nke na -egosi ọdịiche dị n'etiti Chineke na Jizọs. Edere amaokwu ndị a n'usoro ka ha siri pụta na Akwụkwọ Nsọ. Mgbe afọ 50 gachara dị ka onye ozi Pentikọstal Otu, Joel Hemphill bịara ghọta na ọ bụghị naanị na Ozizi Atọ n'Ime Otu abụghị nke Akwụkwọ Nsọ, kama na ọ dịkwa ụkọ nkuzi nke otu. Ọ bụ ezie na Nwanna Hemphill ka na-ejigide Aha Jizọs-ozi ndị ozi, ọ matala na Aha Aha Ndịozi Jizọs n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi anaghị ekwupụta echiche otu ịdị n'otu nke Chineke banyere Akwụkwọ Nsọ.
Edemede gbasara nkuzi otu (modalism) sitere n'aka ndị kwere ekwe n'otu n'otu: https://www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/
Site na Logos ruo Atọ n'Ime Otu: Mgbanwe nke nkwenkwe okpukpe site na Pythagoras ruo Tertullian
Ndị Unitarians: Akụkọ dị mkpirikpi
Akụkọ a dị mkpirikpi nke Unitarianism na -enyocha nkenke mmalite na ọganihu nke ọdịnala okpukpe na -emesapụ aka zuru ụwa ọnụ nke enyere ụkpụrụ nke nnwere onwe, echiche, na ndidi. Site na ụlọ ọrụ ha, Poland na Transylvania nwere oge nnabata okpukperechi. Na Great Britain, dị ka ndị ọsụ ụzọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọgbara ọhụrụ n'oge izizi na ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ha tinyere arụmụka nkuzi na ọmụmụ okpukpe, sayensị, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Na United States, ha duziri otu Transcendentalist, okooko osisi mbụ nke ọdịbendị ọgụgụ isi America. Akwụkwọ a na -enyocha akụkọ ihe mere eme nke ọgbakọ dị iche iche nke Unitarian (na Unitarian Universalist) na Europe, Great Britain, na United States, wee metụ ndị otu ọhụrụ bilitere, ma ọ bụ na -apụta, ọzọ ebe n'ụwa .
N'ime onyinyo mma agha: Ọmụmụ nke Islam na ịrị elu nke Alaeze Ukwu Arab zuru ụwa ọnụ
Mgbanwe nke alaeze Arab bụ otu n'ime akụkọ kacha elu nke akụkọ mgbe ochie, akụkọ bara ụba nke ukwuu na ihe nkiri, agwa na mmezu. N'akụkọ a na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ - nke atọ n'ime usoro ọmụmụ ya nke ụwa ochie - Holland na -akọwa etu ndị Arab siri pụta wee wepụta nnukwu ọmarịcha ọchịchị n'ime iri afọ, na -emeri nsogbu ndị yiri ka ha enweghị ike imepụta akụkụ mmepeanya nke alaeze. tachie obi ruo taa. N'inwe mmetụta miri emi na ihe omume kacha dị mkpa n'oge anyị, Holland na -ejikọ akụkọ na -atọ ụtọ banyere nrịgo nke Islam na ọgba aghara na esemokwu nke ugbu a.
Koran na Baibul: Ederede na nkọwa
Ọkammụta okpukpe ama ama bụ Gabriel Said Reynolds na -adọta ọtụtụ narị afọ nke ọmụmụ Kur'an na ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ iji nye nkọwa siri ike na mkpughe banyere otu akwụkwọ nsọ ndị a siri nwee njikọ. Reynolds na -egosi etu mkpụrụedemede, ihe onyonyo, na akwụkwọ ọgụgụ ndị Juu si pụta ìhè nke ukwuu na Qur'ān, gụnyere akụkọ ndị mmụọ ozi na -akpọ isiala n'ihu Adam na Jizọs na -ekwu okwu dị ka nwa ọhụrụ. Ntinye aka a dị mkpa n'ọmụmụ okpukpe na -egosipụta ntụgharị asụsụ nke Kor'an n'ụzọ zuru oke yana akụkụ ihe odide ndị Juu na nke Ndị Kraịst. Ọ na -enye nkọwa doro anya nke arụmụka dị n'etiti obodo ndị ọkà mmụta okpukpe gbasara mmekọrịta nke akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a, na -enye oghere ọhụrụ nke a ga -esi elele njikọ dị ike nke jikọtara nnukwu okpukpe atọ ndị a.
Ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ: Isi mmalite na ụzọ esi akọwa Akwụkwọ Nsọ
Otu n'ime ndị na-eche echiche ọhụrụ na ngalaba ọmụmụ Islam bụ John Wansbrough (1928-2002), Prọfesọ nke ọmụmụ Semitic na Pro-Director nke Schoollọ Akwụkwọ Mahadum Oriental na Afrịka nke Mahadum London. N'ịkatọ akụkọ ọdịnala nke mmalite nke Alakụba dịka enweghị ntụkwasị obi n'akụkọ ihe mere eme yana nkwenkwe okpukpe siri ike, Wansbrough tụrụ aro nkọwa ọhụrụ dị nnọọ iche na echiche nke ma ndị ụka Alakụba na ọtụtụ ndị ọkà mmụta ọdịda anyanwụ. ihe omimi omimi nke Quran nke dabere na nyocha ụdị. N'ịchọpụta iji ihe onyonyo nke otu mmụọ na-aga n'ihu na-esite na isi mmalite Judeo-Christian, ọ kọwara mbilite nke Alakụba dịka mmepe nke ihe bụbu ọgbakọ ndị Judeo-Christian. Dika otu a bidoro wee dị iche na onwe ya site na mgbọrọgwụ Judeo-Christian, Al-Quran gbalitekwara ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu ruo ihe karịrị otu narị afọ. Wansbrough kwubiri na canonization nke ederede anyị na -akpọ Quran ugbu a, na ọbụna mmalite nke echiche nke "Islam," ma eleghị anya emeghị ruo na njedebe nke narị afọ nke asatọ, ihe karịrị afọ 1977 mgbe Muhammad nwụsịrị.
Ndị Alakụba: Nkwenkwe na Omume Okpukpe ha (The Library of Religious Beliefs and Practices)
Ndị Alakụba: Nkwenkwe okpukpe ha na omume ha na -enye nyocha nke akụkọ ntolite nke Alakụba na echiche sitere na oge okpukperechi ruo n'oge dị ugbu a. Ọ na -enyocha ihe pụrụ iche nke jikọtara ọnụ wee mepụta Alakụba, ọkachasị, Qurʾān na nghọta onye amuma Muḥammad, wee chọpụta ụzọ echiche ndị a siri metụta ime ka ụzọ Islam ruo ugbu a. N'ịjikọ ihe ndị bụ isi na mkpuchi nke mmụta ugbu a na ihe omume na nso nso a na ụwa Alakụba, Bernheimer na Rippin na -ewebata okpukpe a dị oke mkpa, gụnyere ọhụụ Islam ọzọ dị na Shi'ism na Sufism, n'ụzọ dị nkenke, ihe ịma aka, na ume ọhụrụ. A na -emelite mbipụta nke ise emelitere ma gbasaa ebe niile yana igbe igbe ọhụrụ.
Ọchịchị mbụ nke Islam: Umayyad Caliphate AD 661-750
A nabatala akwụkwọ Gerald Hawting dị ka nyocha mmeghe nke oge a dị mgbagwoju anya na akụkọ Arab na Islam. Ugbu a, a na -enyekwa ya ọzọ, yana mgbakwunye nke mmeghe nke onye ode akwụkwọ na -enyocha onyinye dị mkpa na nso nso a na agụmakwụkwọ n'ọhịa. O doro anya na ụmụ akwụkwọ na ndị gụrụ akwụkwọ ga -anabata ya.
Ịhụ Islam dị ka ndị ọzọ hụrụ ya: Nnyocha na nyocha nke akwụkwọ Ndị Kraịst, ndị Juu na Zoroastrian na Islam mbụ.
Akwụkwọ a na -enye ụzọ ọhụrụ maka ajụjụ na -enye nsogbu nke otu esi ede akụkọ mmalite nke Alakụba. Akụkụ nke mbụ na-ekwu maka ọdịdị nke ihe ndị Alakụba na ndị na-abụghị ndị Alakụba maka Middle East na narị afọ nke asaa na nke asatọ wee na-arụ ụka na site n'ibelata nkewa n'etiti ọdịnala abụọ a, bụ nke nnukwu agụmakwụkwọ nke oge a wuru, anyị nwere ike ịbịa. ekele dị mma maka oge a dị oke mkpa. Akụkụ nke abụọ na-enye nyocha zuru ezu nke isi mmalite yana nyocha nke ihe odide 120 na-abụghị ndị Alakụba, ha niile na-enye ozi gbasara narị afọ mbụ na ọkara nke Alakụba (ihe dịka AD 620-780 AD). Akụkụ nke atọ na -enye ihe atụ, dabere na usoro a tụrụ aro na akụkụ nke mbụ yana ihe ewepụtara na akụkụ nke abụọ, ka mmadụ ga -esi dee akụkọ ihe mere eme nke oge a. Akụkụ nke anọ na -ewere ụdị nkuzi na isiokwu dị iche iche, dị ka usoro nke islamism, ihe ịtụgharị na Islam, imepụta usoro maka ikpebi ntụzịaka ekpere, na imeri Egypt.
Azụmaahịa Meccan na ịrị elu nke Alakụba
Patricia Crone na -enyocha otu n'ime nkwenkwe ndị mmadụ nabatara nke ọma na akụkọ nke mmalite nke Alakụba, na -eche na Mecca bụ ebe azụmaahịa na -aga nke ọma na mbupụ ngwa nri na -esi ísì ụtọ na Mediterranean. N'ịrụtụ aka na echiche nke ọma dabere na akụkọ mgbe ochie nke azụmahịa dị n'etiti ndịda Arabia na Mediterenian ihe dị ka afọ 600 tupu afọ Muhammad, Dr. Crone rụrụ ụka na ụzọ ala akọwara na ndekọ ndị a adịteghị aka nakwa na ndị Alakụba isi mmalite anaghị ekwu maka ụdị ngwaahịa a. Na mgbakwunye n'ịgbanwe echiche anyị banyere ọrụ azụmaahịa, onye ode akwụkwọ nyochagharịrị ihe akaebe maka ọnọdụ okpukpe nke Mecca tupu oge Alakụba ma chọọ ịkọwapụta ọdịdị nke isi mmalite nke anyị kwesịrị ịhazigharị foto anyị banyere ọmụmụ nke okpukpe ọhụrụ na Arebia. Patricia Crone bụ prọfesọ akụkọ ihe mere eme nke Alakụba na Institute for Advanced Studies, Princeton.
Okporo ụzọ gaa na Alakụba: Mmalite nke Okpukpe Arab na Ala Arab (Ọmụmụ Alakụba)
Ọkà mmụta ihe ochie bụ Yehuda D. Nevo na onye nchọpụta Judith Koren na -ewepụta usoro mgbanwe nke mmalite na mmepe nke steeti Alakụba na okpukperechi. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọrụ n'okwu a na -enweta echiche ha banyere akụkọ ihe mere eme nke oge a site n'akwụkwọ ndị Alakụba, Crossroads to Islam na -enyochakwa ụdị ihe akaebe dị mkpa ruo ugbu a: elele akwụkwọ nke ndị bi na mpaghara (Ndị Kraịst), ihe mgbe ochie, ihe omimi, na ọkachasị okwute. ihe odide. Ntụle ndị a tọrọ ntọala maka echiche dị egwu maka mmepe nke Alakụba. Dị ka Nevo na Koren si kwuo, ihe akaebe na -egosi na ndị Arab bụ n'ezie ndị ọgọ mmụọ mgbe ha malitere ike na mpaghara nke Alaeze Ukwu Byzantium na -achịbu. Ha na -ekwu na ndị Arab weghaara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha enweghị mgba, n'ihi na Byzantium ahapụla nke ọma na mpaghara ahụ ogologo oge gara aga. Mgbe ha nwetasịrị nchịkwa, ndị isi Arab ọhụrụ nakweere otu chi dị mfe nke Judaeo-Christianity nwere, nke ha zutere n'ókèala ha nwetara ọhụrụ, wee jiri nwayọọ nwayọọ wepụta ya ka ọ bụrụ okpukpe Arab. Ọ bụghị ruo n'etiti narị afọ nke 8 ka emechara usoro a. Nkọwa nke ihe akaebe a na -akwado echiche nke ndị ọkà mmụta ndị ọzọ, ndị na -enye echiche dị iche iche na Alakụba na ụdị nke Koran nwere ogologo oge mmepe.
archive.org - Archive INTERNET - NDỤMỌDỤ AKWỤKWỌ JOSIAH